Ukufunyanwa kwe-B2B: Fumana uluhlu olungaphezulu lwemali yakho | Martech Zone
Ukufunyanwa kwe-B2B: Fumana uluhlu olungaphezulu lwemali yakho
NgoLwesibini, Agasti 29, 2006 NgoLwesibini, Agasti 29, 2006 Douglas Karr
Ishishini ukufunyanwa kweShishini kunokuba nzima. Ukuba ungumbutho onika iinkonzo kwingingqi enkulu enenani elincinci labasebenzi, ufuna ukuqinisekisa ukuba isicwangciso sakho sokufumana sisebenza ngokufanelekileyo. Ukuba kukho amashishini angama-50,000 25 kuloo mmandla, masicinge ukuba unganxibelelana namathemba angama-5 ngeveki, okanye ama-20 ngosuku. Oko kuya kufuna ukuba ube nabathengisi abangama-XNUMX. Yinto entle ukuba ndlongondlongo kwintengiso kunye neqela lokuthengisa ngomnxeba kwaye amathuba okuba awunawo amandla amakhulu okuthengisa!
Ungathini xa unokunxibelelana namashishini angama-5,000 1 (10 kwali-XNUMX)? Ungafumana njani kwaye ujolise kuloo mashishini? Impendulo ilele kubuchule obuthile bokuthengisa obugciniweyo obusetyenziselwa ishishini ekufumaneni ishishini. Ndibonelele ngolu hlalutyo kunyaka ophelileyo kwifemu yengingqi, kwaye ngoku sigqibe nje unyaka wethu wesibini wokuzikhangela. Ayisiyenzululwazi yerocket, kukujonga nje kumashishini ahambelana nefemagrafi yesiseko sabathengi bakho.
Inyathelo 1: Inkangeleko yamashishini akho. Le yinkonzo uninzi lweenkampani zedatha eziyakukubonelela ngexabiso eliphakathi. InfoUSA, Dun kunye neBradstreet, kunye neAccuData zimbalwa zezi ntlobo zeenkampani. Nje ukuba ufumane iingxelo, kubalulekile ukuba uzihlalutye kwaye uziqokelele kwidatha efanelekileyo. Nanku umzekelo (Cofa ukujonga):
Iminyaka kwiShishini ngoShishino - Ukungena%:
Umthamo weNtengiso yeShishini nguShishino - Ukungena%:
Inani labasebenzi nguShishino - Ukungena%
Inyathelo 2: Hlalutya iziphumo
Ukungena kungena kwipesenti yabathengi kolo luhlu oluthelekisileyo kwipesenti yexabiso eliphakathi kolo luhlu. Ngamanye amagama, ukuba iipesenti ezingama-25 zabathengi bakho bebekwishishini ixesha elingaphantsi konyaka, kodwa kuphela i-10% yamashishini engingqi ebekwishishini ixesha elingaphantsi konyaka, ke ujolise kumashishini amatsha! Ngokwenza njalo, uyawonyusa amathuba akho okufumana ithemba kunokuba ujonge iinkampani ezingathelekisiyo.
Umqondiso oxeliweyo wokuba ungazenza na okanye ungazisebenzisi idatha kukujonga nje ubume begophe kunye nobudlelwane ngaphakathi kwishishini. Nazi ezinye izinto eziqwalaselwayo ngokubanzi (iziqhamo ezijingayo ezisezantsi) kwiitshathi ezingentla:
Inani leminyaka kwi-shishini: Qaphela ukuba zombini i-G & H ine-Peak kunyaka wokuqala okanye ngaphantsi? Ndingathatha ukubetheka nzulu kula mashishini kwaye ndinokutyala imali kuluhlu lwamashishini amatsha.
Umthamo wokuThengisa: Ngelixa uninzi lwamashishini luphakama kwaye luwela kwigophe elihle, qaphela indlela ezakha ngayo iirowu eziya phezulu? Ke… okukhona inkulu ifemu yokwakha, ingcono!
Inani labasebenzi: Qaphela ukuba icandelo lenkonzo licaba njani? Oko kundixelela ukuba inani labasebenzi alinakuba liloo nto kolu shishino.
Inyathelo 3: Faka isicelo kwiziphumo
Ukuba bendifuna ukonqena nokukhawuleza, bendiya kubonelela ngenkampani yam yedatha ngeencopho zegophe lam kwaye ndisebenzise ezo zinobuncinci ekujoliseni amathemba kumzi mveliso ngamnye. Iinkampani zedatha zihlala zingakuhlawulisi ngokwenza imibuzo enzima ngokuchasene nedatha yokuza noluhlu lwakho ukuze ungabi nazintloni, buza! Eyona ndlela ibhetele yokwenza oko kukuphuhlisa amanqaku e-algorithms ngokusekwe kwiprofayili, kwaye emva koko uyisebenzise loo fomyula kwithemba lokufumana amanqaku apheleleyo ngethemba. Mane u-odole amathemba akho ngokuhla, kwaye uqalise ukufunyanwa!
Inyathelo 4: Phumeza!
Xa sasiqhuba la maphulo kubaxhasi bethu, sahlalutya ukuba yeyiphi na imveliso yabo yokunxibelelana namathemba. Ukuqonda ukuba mangaphi amathemba abanokunxibelelana nawo kusinikeze ukubalwa esikudingayo ukunciphisa uluhlu lwabo lokukhangela. Senze umzamo we-3-prong obangele ukonyuka kwe-10% yokufumana!
Inyathelo 5: Hlaziya iziphumo ezintsha kwaye uqale ngaphezulu
Ukuma komhlaba kuyatshintsha njengoko zinjalo neempawu zabathengi bakho. Kubalulekile ukuqhubeka nokucokisa kunye nokuhlengahlengisa amanqaku akho kunye nokujonga izinto.
Inqaku lokugqibela: Kukho iincwadi ezipheleleyo ezibhalwe kwiindlela zokuthengisa zedatha. Kunzima ukunxibelelana nenkqubo yentengiso yedatha entsonkothileyo kufakelo olunye lwebhlog, ngenxa yoko ndithathe inkululeko yokwenza uqikelelo oluninzi kwaye ndithatha iindlela ezimfutshane. Inkqubo eyiyo esityhalele ngayo lo mthengi ithathe iinyanga ezimbalwa. Sichonge kwaye sathelekisa iipesenti ezingama-95 zabathengi babo babuyela eDun naseBradstreet idatha ukufumana iprofayili ebalaseleyo. Xa sikhetha amathemba ethu okugqibela, ngokuqinisekileyo sibakhuphele ngaphandle abathengi babo bangoku kunye nabaphelelwe lixesha.
Ndifuna nje ukubonisa ukuba kukho uhlalutyo olulula nolucwangcisekileyo onokulwenza ngaphandle kwespredishithi ye-Excel eya kuphucula ishishini lakho kwimizamo yokufumana ishishini!
Izimvo zikaGore kutshintsho lweendaba lweMedia
Ukunyuka kwelanga leNihon
Agasti 29, 2006 ngo-7: 56 PM
Ndacinga ukuba le yayiyiposti eluncedo kakhulu. Kumava am, uninzi lwabanini bamashishini abancinci abayikhuphi nzulu le mveliso okanye uhlalutyo lweemarike njalo njalo. Kodwa (ngokucacileyo) ukwenza njalo kungahlawula ngokunceda eli shishini likhokele iinzame zabo lijolise kwezona njongo zijolise kuzo. Enkosi ngolwazi!